McCain: उत्कृष्ट फ्रेन्च फ्राइजलाई उत्कृष्ट कच्चा पदार्थ चाहिन्छ। र हामी यसलाई रूसमा बढाउने योजना बनाउँछौं - आलु प्रणाली पत्रिका
दृढ McCain सन् १९५७ मा क्यानडाका म्याककेन भाइहरूले स्थापना गरेका थिए। उनको काम को आधार एक साधारण थीसिस थियो - राम्रो व्यापार सही नैतिक स्तर संग सुरु हुन्छ। यो सिद्धान्त कम्पनीको कर्पोरेट उत्तरदायित्व नीतिको आधारभूत मानक बनेको छ, जसको आदर्श वाक्य वाक्यांश बनेको छ: राम्रो बन्नुहोस्। राम्रो गर! (सबैभन्दा राम्रो बन्नुहोस्, राम्रो गर्नुहोस्!)
कम्पनीको कामको व्यावसायिक प्रकृतिको बावजुद, चार सिद्धान्तहरू यसको प्राथमिकताहरू हुन्: सुरक्षा, सम्मान, खुलापन र विश्वसनीयता।
मिति गर्न, McCain जमे भएका आलु उत्पादनहरूको विश्वको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो। कम्पनीले 51 कारखानाहरू सञ्चालन गर्दछ र 160 देशहरूमा सञ्चालन गर्दछ।
दृढ McCain आलु उद्योगमा 60 वर्षको अनुभव छ, तर एकै समयमा विकासको लागि निरन्तर प्रयास गर्दछ र भविष्यको बारेमा सोच्दछ - खेतीका नवीन तरिकाहरू अनुसन्धान गर्दछ, माटो संरक्षण र आर्द्रता संरक्षण गर्न काम गर्दछ, आलु खेती जलवायु-दिगो र पारिस्थितिकी बनाउँछ।
McCain कम्पनीको बिरुवामा आलु आपूर्ति गर्ने यसका कृषि साझेदारहरूसँग नजिकबाट काम गर्दछ, किनभने फ्रेन्च फ्राइजको उत्पादन आलु खेतबाट सुरु हुन्छ।
प्रत्येक कृषि उद्यम एक अलग कर्मचारी द्वारा पर्यवेक्षण गरिन्छ McCain। कम्पनीका विशेषज्ञहरूले परियोजनाको पूर्ण समर्थन गर्छन् र उपज बढाउन, आलुको गुणस्तर सुधार गर्न र उत्पादनहरूको शेल्फ जीवन बढाउने उद्देश्यका लागि सिफारिसहरू दिन्छन्। कम्पनी र यसका कृषि साझेदारहरू एक साझा लक्ष्यद्वारा एकताबद्ध छन् - उत्तम आलुहरू प्राप्त गर्न, किनकि त्यस्ता कच्चा मालबाट मात्र तपाईंले संसारमा सबैभन्दा राम्रो फ्रेन्च फ्राइज बनाउन सक्नुहुन्छ!
कृषि साझेदारहरूको नेटवर्कमा McCain विश्वभरका ३५०० भन्दा बढी किसान र कृषि उद्यमहरू समावेश छन्। कम्पनीले तिनीहरूसँग दीर्घकालीन सम्बन्ध निर्माण गर्न प्रयास गर्छ - अमेरिका र युरोपमा त्यहाँ खेत परिवारहरू छन् जसमा कच्चा मालको खेती। McCain किसानहरूको तेस्रो पुस्तामा संलग्न।
McCain पारिवारिक व्यवसाय हो, र कम्पनीका साझेदारहरू यस ठूलो कृषि परिवारको हिस्सा बन्छन्। के तपाईं उसलाई सामेल हुन चाहनुहुन्छ?
संग काम गर्दै McCain, तपाइँ कम्पनी को विशेष किस्महरु को लागी पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ, नवीनतम कृषि ज्ञान; महत्त्वपूर्ण अनुभव प्राप्त गर्नुहोस् र पेशेवरहरूको समर्थनमा तपाईंले उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त गर्नुहुनेछ।
निकट भविष्यमा कम्पनी McCain रूस मा यसको उत्पादन स्थानीयकरण र फार्म र कृषि उद्यमहरु संग सहयोग विस्तार गर्ने योजना छ। रूस मा McCain प्रतिनिधित्व गर्नुहोस्: McCain Marketing (Rus) LLC को वितरण विभाग, McCain Agriculture (Rus) LLC को कृषि विभाग, साथै McCain Foods Rus LLC, जसले तुला क्षेत्रमा बिरुवा निर्माण परियोजना कार्यान्वयन गर्दैछ।
कम्पनी प्रतिनिधित्व McCain रसियामा
105082, मस्को, सेन्ट। मलाया पोचतोवाया, १२, भवन १
दूरभाष: +7 (495२974) २ 23० 19०
कच्चा माल खरिद प्रबन्धक रिनाट खान्टसेरोभ: +7910 076 82 26
McCain निर्माण साइट
301637, तुला क्षेत्र, Uzlovsky जिल्ला, Ogarevka गाउँ, विशेष आर्थिक क्षेत्र "Uzlovaya"
टैग: McCainफ्रेन्च फ्राइज उत्पादन
यमालमा, आलु र तरकारी रोप्ने तयारी गर्दै
तिनीहरू के कुरा गर्छन् र लेख्छन्